January 2012 | မာယာဖြူ
ညင်ညင်သာသာစီးဆင်းနေတဲ့မြစ်တစ်စင်းပဲဖြစ်ဖြစ် မာန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့စီးဆင်းနေတဲ့မြစ်တစ်စင်းပဲဖြစ်ဖြစ် မြစ်တစ်စင်းစီးဆင်းလာနိုင်ဖို့ အဲဒီမြစ်ကိုစတင်မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့နေရာတစ်ခုကတော့ ရှိစမြဲပါပဲ ...
ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ ဘ၀အတွက် မတူညီကြတဲ့နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ အချိန်နဲ့အမျှ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြတာပါပဲ။
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ နေရာတိုင်းမှာ မှန်တာတွေလုပ်မိတာလည်းရှိသလို အမှားတွေတော်တော်များများလည်း လုပ်မိတတ်ကြတယ်။
သိပေမယ့် မေ့လျော့နေတာတွေလည်း များပါတယ်။
တော်တော်များများ မမေ့သလိုလိုနဲ့ မေ့လျော့နေတတ်တာတွေထဲမှာ “လေးစားမှု” ဆိုတာလည်း ပါပါတယ်။
အဲဒီလေးစားမှုဆိုတဲ့နေရာမှာ ကြီးငယ်အရွယ်မရွေး လူအချင်းချင်း လေးစားမှုအပြင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှု ကိုလည်း ဆိုလိုပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ကို လူတွေအများကြီးက သူတို့ကိစ္စတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး ပြောပြတယ် တိုင်ပင်တယ် အကြံဥာဏ်တွေတောင်းတယ်။
အဲဒီလူက သူဌေးမို့လို့လား ?
ဒါမှမဟုတ် ပညာတွေအရမ်းတက်နေလို့လား ?
အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး အဖြေတွေကတော့မျိုးစုံရှိနေမှာပါ။ ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် တူညီတာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။
အဲဒါကတော့ တိုင်ပင်ကြတဲ့လူတွေအားလုံးက အဲဒီတိုင်ပင်ခံရတဲ့လူအပေါ်မှာထားတဲ့ "လေးစားမှု" ပါပဲ။
ပြီးတော့ ယုံကြည်မှု။ ယုံကြည်မှု ဆိုတာဟာလည်း လေးစားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေပါတယ်။
အဲဒီလေးစားတဲ့စိတ်ကြောင့် ဒီလူပြောတဲ့နည်းလမ်းကို လိုက်လုပ်ကြည့်မယ် ဒီလူပြောရင် နားထောင်မယ် ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ဖြစ်လာတာပါ။
အဲဒီ လေးစားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပိုက်ဆံချမ်းသာလို့ ကိုယ်တွေထက် ပညာတတ်လို့ ဒါတွေက အဓိက မဟုတ်ပါဘူး။
ပိုက်ဆံချမ်းသာတိုင်း ဘွဲ့တွေတစ်သီကြီးရထားတိုင်း ရာထူးဂုဏ်ရှိန်ကြီးကြီးရှိတိုင်း လေးစားခံပြီး နေနေရတာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါတွေပိုင်ဆိုင်ပြီး လူတွေမလေးစားနိုင်တဲ့သူတွေ လောကမှာ ဒုနဲ့ဒေးပါပဲ။
လူအများလေးစားခံရသူဟာ ပိုင်ဆိုင်မှုများများစားစားမရှိလည်းပဲ ခုနလူမျိုးတွေထက် ပိုသာပါတယ်။
သူများကိုယ့်ကိုလေးစားဖို့ဆိုတာ အရင်ဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားဖို့ လိုပါတယ်။ အဲဒါက နံပါတ်တစ်အရေးကြီးဆုံးပါ။
ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု (confidence)။ ကိုယ့်ရပ်တည်မှု၊ ကိုယ့်အတွေးအခေါ်၊ ကိုယ့်ဆုံးဖြတ်ချက်၊ ကိုယ့်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ယုံကြည်လေးစားပါ။
ပြီးတော့ သူများရဲ့ ရပ်တည်မှု၊ အပြုအမူ၊ အတွေးအခေါ်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်း လေးစားပါ။ ဒါမှ သူများကလည်းကိုယ့်ရဲ့အပြုအမူတွေကိုကြည့်ရင်း ကိုယ့်ကိုလေးစားလာနိုင်ပါမယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်မလေးစားတတ်တဲ့သူဟာ သူတစ်ပါးကိုလည်း လေးစားတတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
သူတစ်ပါးကို မလေးစားတတ်တဲ့သူဟာ တစ်ပါးသူရဲ့လေးစားမှုကိုလည်း ဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူး။
အဲ - တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် confidence ရှိပါ ဆိုတဲ့နေရာမှာ self-confident မဖြစ်ဖို့တော့ လိုပါသေးတယ်။
self-confident ဆိုတာက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် self-confident က ငါပြောတာ/ ငါလုပ်တာမှအမှန် ဆိုတဲ့အစွန်းရောက်ယုံကြည်မှုမျိုးပါ။
self-confident ရှိရင် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ အဲလိုယုံကြည်မှုမျိုးကတော့ မရှိသင့်ပါဘူး။
သူများအမြင်မှာ ကိုယ့်တန်ဖိုးမြင့်နေဖို့အတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကိုယ့်တန်ဖိုးကိုအရင်မြှင့်တင်ရပါမယ်။ ဒါဟာဘယ်သူကမှ လာလုပ်ပေးလို့မရပါဘူး။
နောက် သင့်လျော်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်၊ အကြံပေးနိုင်ဖို့အတွက် ထိုက်သင့်တဲ့အတွေ့အကြုံ ၊ အတွေးအခေါ် ၊ ပညာ ဒါတွေရှိနေဖို့တော့လိုပါတယ် (ဒီနေရာမှာ ပညာဆိုတာ အတန်းပညာကို မဆိုလိုပါဘူး)။
ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဘ၀လမ်းမှာ ကြုံခဲ့ရသမျှ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ၊ အမှားတွေကနေပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်းရလာတဲ့ပညာမျိုးပါ။
များများမှားဖူးလေ အမှားတွေ အလွဲတွေကို များများဖြေရှင်းဖူးလေ အတွေးအခေါ် ပညာ တိုးတတ်လေပါပဲ။ ဒါဟာ စာသင်ခန်းထဲကနေ ဘွဲ့လက်မှတ်တွေကနေ မပေးနိုင်တဲ့ ပညာပါ။
အခက်အခဲကြုံလာရင် ရှောင်ထွက်ပြေးဖို့၊ လုပ်မကြည့်ရသေးဘူး အရင်လက်လျော့တတ်တာမျိုးတော့ မလုပ်သင့်သလို မလုပ်မိအောင်လည်း အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်လေးစားတဲ့သူ၊ ဘ၀မှာ အခက်အခဲတွေကို သတ္တိရှိရှိ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတတ်တဲ့သူဟာ အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှ လူအများ လေးစားထိုက်တဲ့သူ လေးစားခံရတဲ့သူ ဖြစ်လာမှာ မလွဲပါဘူး။
လက်ရှိအချိန်မှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က လူအများလေးစားခံရတဲ့သူ မဖြစ်သေးရင်တောင်မှ လူတစ်ယောက်ချင်းစီဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားတတ်တဲ့သူ တစ်ဘက်သားကိုလေးစားတတ်တဲ့သူတော့ ဖြစ်နေသင့်ပါတယ် ။ ။
တိုက်တဲ့လေမှာ အမုန်းမပါဘူး အဆုံးမှာ သစ်ရွက်ကြွေရတယ် ...
စီးတဲ့ရေမှာ မျက်လုံးမပါဘူး နိဂုံးမှာ ကမ်းပါးသေရတယ် ...
စကားလုံးမှာ ဓါးသွားမပါဘူး ဒါပေမယ့် နှ လုံး သား တော့ ကြေ မွ တယ် ...
လူဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကြိုက်ချင်း အတွေးအခေါ်ချင်း အယူအဆချင်း မတူနိုင်ပါဘူး။ မိဘနဲ့သားသမီး ညီအစ်ကိုမောင်နှတွေကြား သူငယ်ချင်းတွေကြား ချစ်သူတွေကြား လင်နဲ့မယားကြားမှာ သဘောထားကွဲလွဲတာ၊ အယူအဆချင်းမတူတာ၊ လုပ်ပုံကိုင်ပုံချင်းမတူတာ ဒါတွေဟာ လူတိုင်းမလွဲမသွေကြုံကြရမှာပါပဲ။ အယူအဆမတူဘူး၊ အကြိုက်မတူဘူး၊ သဘောထားမတူဘူး၊ အတွေးအခေါ်မတူဘူး၊ မျှော်မှန်းချက်တွေမတူဘူး ဆိုတာ သဘာဝပါပဲ။ အဲဒီတော့ မတူညီတာတွေ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြတဲ့အခါမှာ စကားများရန်ဖြစ်ကြတာလည်း သဘာဝပါပဲ။ ရန်ဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဟာ လူ့သဘာဝပါ။ အဲ - လူမှမဟုတ်ပါဘူး တိရိစ္ဆာန်တွေလည်း ရန်ဖြစ်တတ်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လူကတော့ပိုပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူက ပိုသိတယ်၊ ပိုခံစားတတ်တယ်။
ပိုသိလေလေ ပိုခံစားတတ်လေလေ ပိုပြီးတော့သဘောထားတွေက မတူညီလေ ပိုပြီးတော့ ပဋိပက္ခဖြစ်လေပါပဲ။ လူကြီးမိဘတွေက ရန်မဖြစ်ကြနဲ့ သင့်သင့်မြတ်မြတ်နေကြပါ ဆိုပြီး ဆုံးတော့ဆုံးမကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ဒါဟာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးပါ။ ဒါကြောင့်မတတ်နိုင်တာကို မဖြစ်ဖို့ ပြောနေလို့လည်း မထူးပါဘူး။ ဒါကြောင့်မထူးတော့တဲ့အတူတူ ရန်ဖြစ်ပါ။ လူတိုင်း ရန်ဖြစ်လို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုတော့သိထား၊ နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီရန်ဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာ ကိုယ့်သဘောထား၊ ကိုယ့်အကြိုက်၊ ကိုယ့်အတွေးအခေါ်၊ ကိုယ့်အယူအဆ၊ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတာ၊ ကိုယ်ဘယ်ဟာကို မှားတယ်လို့ယူဆတာ၊ ကိုယ်ဘယ်ဟာကို မှန်တယ်လို့ယူဆတာကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်လည်းပဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း၊ တိတိကျကျ၊ ပြတ်ပြတ်သားသား သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ရန်ဖြစ်တဲ့လူဟာ ကိုယ့်မောင်နှမဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ မိဘလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ထဲကလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ ချစ်သူလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်၊ ဇနီး (သို့) ခင်ပွန်းလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ အဲဒီရန်ဖြစ်နေရတဲ့သူရဲ့ အတွေးအခေါ်၊ သူ့သဘောထား၊ သူ့အကြိုက်၊ သူ့ဝါသနာ၊ သူဘယ်ဟာကို မှားတယ်လို့ထင်သလဲ၊ သူဘယ်ဟာကို မှန်တယ်လို့ထင်သလဲ၊ သူဘယ်ဟာကို ကောင်းတယ်ထင်သလဲ၊ သူဘယ်ဟာကို မကောင်းဘူးထင်သလဲ။ ပြီးတော့ ဘာကြောင့်သူအဲဒီလို တစ်ခုကိုကောင်းတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုကို မကောင်းဘူးလို့ ထင်ရသလဲ၊ သူဘယ်လိုခံစားနေရသလဲ၊ အဲဒါတွေကိုပါ သိအောင်လုပ်သင့်ပါတယ်။ ကိုယ့်သဘောတွေကိုလည်း ကိုယ်သိနေရမယ်။ သူ့သဘောထားကိုလည်း သိအောင်ကြိုစားရပါမယ်။ သိပြီးမှ နားလည်ပြီးမှ ဆွေးနွေးပါ။ ရသလောက်ညှိပါ၊ ဒါပေမယ့် တူတော့တူသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အယူအဆမတူပေမယ့် သဘောထားမှန်မှန်နဲ့ လက်ခံဖို့တော့လိုပါတယ် (ဒီနေရာမှာသဘောထားကြီးနိုင်ရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း အတ္တတွေနဲ့ ပုထုဇဉ်လူသားတွေမို့လို့ သဘောထားကြီးဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ ဒီတော့ သဘောထားမကြီးနိုင်ရင်တောင်မှ သဘောထားမှန်ဖို့တော့လိုပါတယ်)။ စကားများ ရန်ဖြစ်ကြပေမယ့် အဲဒီလူတွေနဲ့ပဲ အဆင်ပြေအောင်ဆက်ပြီးတော့ နေသွားဖို့လိုပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီမိဘ ဒီမောင်နှမ ဒီသူငယ်ချင်း ဒီချစ်သူ ဒီအိမ်ထောင်ဘက် တွေနဲ့ တစ်သက်လုံး ဘယ်သူမှ မကင်းနိုင်ကြပါဘူး။ ညှိနှိုင်းလိုက်ကြလို့ သဘောထားတွေရော တူသွားနိုင်လားဆိုတော့ မတူနိုင်ပါဘူး။ အဲလိုပဲ အယူအဆ အတွေးအခေါ်တွေလည်း တူသွားမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ။ အဲဒီလိုမကင်းနိုင်တဲ့လူတွေ ဘယ်တော့မှ မတူနိုင်တဲ့လူတွေပဲ နားလည်ပေးပြီးတော့ ညှိနှိုင်းပြီးတော့ တစ်သက်လုံးနေသွားရမှာပါပဲ။ အဲလိုနေသွားနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုနေမှလည်းပဲ နေလို့ဖြစ်ပါမယ်။ ရှေ့ဆက်လို့ရပါမယ်။
အမည်သိခက်မြတ်နိုးလျှက် ... နင်
မှတ်မည်ဖျောက်ခက်မြတ်နိုးလျှက် ... နင်
တစ်ပင်တည်းပင် ချစ်သစ်ပင် . . .
မင်း စိုးမိုးစေချင်စမ်းတယ် . . .
ကော်ဖီခွက်မှာလည်း လှိုင်းရှိပါတယ် ..
အမြင့်နှစ်ခုကြားမှာလည်း လေတိုက်တာပဲ ..
အပြာနဲ့အ၀ါရဲ့တိုက်ဆိုင်မှုလို့ မှတ်ယူပါ့မယ် ..
မြိုသိပ်ထားရတာလည်း ခံယူတတ်ရင်လှတာပါပဲ ..
တံခါးပေါက်တွေလည်း ဖွင့်ထားပါတယ် ..
ကျေနပ်ပါတယ်လေ . . .
ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ အကြီးကြီးပေးနိုင်မှ/ ရမှ ပျော်ရွှင်မှု လို့ခေါ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တခါတလေကျ ဘာရယ်မဟုတ်တဲ့ အသေးအဖွဲလေးတွေကနေလည်း ကြီးမားတဲ့ပျော်ရွှင်မှုကို ရတတ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့လုပ်ရပ် အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့အပြောပဲ လုပ်နေ ပြောနေရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တခါတရံ အဓိပ္ပါယ်မရှိပေမယ့်လည်း လုပ်လို့/ပြောလို့ရတယ်။ အမြဲပဲ အဓိပ္ပါယ်ရှိမှလုပ် အဓိပ္ပါယ်ရှိမှပြော ဆိုတဲ့ နှောင်ဖွဲ့မှုတွေနဲ့ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းဖို့ စိတ်ကူးမရှိဘူး။ အသက်ရှင်နေတုန်းမှာ စိတ်ရှိတဲ့အတိုင်း (တပါးသူကိုထိခိုက်စေခြင်းမရှိ) လွပ်လပ်စွာနေဖို့ပဲ စိတ်ကူးရှိတယ်။ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုက တပါးသူအပေါ် တည်မှီမနေသင့်ဘူး။ အဲလိုတည်မှီနေရင် ပျော်ရွှင်မှုထက် ကြေကွဲမှုတွေပဲရဖို့က ပိုများတယ်။ ကိုယ့်ပျော်ရွှင်မှုကို ကိုယ့်ဘာသာဖန်တီးတာ အကောင်းဆုံးပါ။
ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့နေ့တွေမှာ ပျော်ရွှင်ခြင်း ၀မ်းနည်းခြင်းတွေ ရင်ခုန်ခြင်း ကြေကွဲခြင်းတွေ တွေ့ဆုံခြင်း လမ်းခွဲခြင်းတွေ မျှော်လင့်ထားပေမယ့် ဖြစ်မလာတာတွေ မမျှော်လင့်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေက မမျှော်လင့်တဲ့နေရာကနေ ရုတ်တရက်ပေါ်လာတာတွေ တခြားသူအမှားကြောင့် ကိုယ့်စိတ် ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ့်ရည်မှန်းချက် ပြိုလဲထိခိုက်ခဲ့ရတာတွေ ကိုယ်ယုံကြည်သမျှကို နင်းခြေခံခဲ့ရတာတွေ အောင်မြင်ခြင်း ဆုံးရှုံးခြင်းတွေ အမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။
ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကို မှန်သည်ဖြစ်စေ မှားသည်ဖြစ်စေ ကျေနပ်သည်ဖြစ်စေ မကျေနပ်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်မတို့ လက်ခံခဲ့ကြရတာပါပဲ။
ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်လို့မရတော့တဲ့အမှားတွေကို နှစ်ဟောင်းနဲ့အတူ ချန်ရစ်ခဲ့ပါ။
ပြင်ဆင်လို့မရတော့တဲ့အမှားတွေကို မချန်ရစ်နိုင်ပဲ ရှေ့ဆက်ရမယ့်ခရီးတစ်လျှောက်သယ်သွားရင် နောက်ထပ်အဖြစ်အပျက်အသစ်အသစ်တွေကို လက်ခံဖို့ ဖြေရှင်းဖို့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာ နေရာကျဉ်းသွားပါလိမ့်မယ်။
အမှားတွေကို ထမ်းပိုးထားရလို့ လေးလံနေတဲ့စိတ်တွေကြောင့် ကိုယ့်ဘ၀အတွက် ရည်မှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ အချိန်တွေ နှောင့်နှေးသွားနိုင်ပါတယ်။
ဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ ကျွန်မတို့ဆွဲထားလို့မရတဲ့အချိန်ကတော့ သူ့တာဝန်အတိုင်း အချိန်မှန်မှန်နဲ့ တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ တစ်လပြီးတစ်လ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်နဲ့ ဆက်လက်ချီတက်နေအုံးမှာပါပဲ။
ကျွန်မတို့လည်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်လို့မရတော့တဲ့အမှားတွေကို ဘ၀တစ်လျှောက်သယ်ယူသွားမယ့်အစား အဲ့ဒီအမှားတွေကနေ သင်ခန်းစာယူရင်းးး
ကဲ - သူငယ်ချင်းများအားလုံးးးးးးးးးးးး